Sida loo Beddelaan Video inay DVD
> Resource > Video > talinayo DVD Converter Wixii oo macmal ah Videos
Ma leedahay qaar ka mid ah videos oo macmal ah in aad u baahan tahay si loogu badalo si DVD ah? Ma u baahan tahay in ay wax ka bedel goobaha ka hor inta aadan badalo qaab faylka oo way gubi doonaan? Ma ganacsiga, waxbarashada ama shakhsi loo isticmaalo? Ma rabtaa in aad si loo hubiyo in DVD waa playable ciyaaryahanka DVD ah? Maxay dhab ahaan waa wax ay tahay in tayada aan la saameeyeen ee diinta la kala dooran karo si ay u edit iyo sidoo kale in ay gubaan videos soo galeen DVD ah in ay socon muddo ku dhow ciyaaryahan kasta DVD. Waxaan leenahay afar converters DVD sida talo iyo faahfaahin waa sidan:
Xulashada 1: AVStoDVD
Xulashada 2: DVD Creator
Xulashada 3: TMPGEnc DVD Author
Xulashada 4: Video Converter Ultimate
The AVStoDVD waa mid ka mid ah converters DVD caan ah oo lacag la'aan ah ee lagu iibiyo suuqa. Ma noqon doonto Converter ugu falgal DVD in aad soo guud ahaan. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay toos ugu filan kuwii horay loo isticmaalo software kale la mid ah. Waxaa la iman muuqaalada Customization aad DVD menu iyo xitaa caawinaysa feature jiitaa-iyo-hoos u dhac uu ku sameeyo rearranging ee cutubyada, sawirada iyo kuwa kale oo badan oo sahlan.
Dhinaca kale oo kaliya in tani ay tahay in aad u baahan tahay si ay u gubaan DVD dhabta ah iyadoo la isticmaalayo software ka duwan; ImgBurn waa garab ugu fiican. Sidaas, Marka aad tafatirka dhammeeyayna iyo diinta aad oo macmal ah videos, si fudud u geliyaan faylasha beddelay ImgBurn ka dibna dooro haddii aad jeclaan doonaa in ay ama la abuuro DVD a video, HD ama Blu-Ray disc.
Haddii aad diiwaan u videos oo macmal ah oo leh qaab gaar ah file ama codec in aad u baahan tahay oo aan u baahnayn beddelaad wax, isku day in aad soo abuure DVD . Si ka duwan AVStoDVD, waa user-friendly xitaa bilowga ah la interface la wada qabanayo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa jiidi-iyo-jeedi oo macmal ah videos gal interface ama adigoo gujinaya + Import . Icon qalin waxay kuu keeni doontaa in shaashadda tafatirka-waqtiga dhabta ah meesha aad u xoojin karto iyo jar goobaha aad soo xulay.
Ka dib markii in, waxaad sii wadi kartaa in la shakhsiyeeyo menu ee DVD aad la Customization ah thumbnails, sawir jeeda, music, qoraalka iyo wax ka badan. Waxa kale oo aad ku eegaan kartaa video saxar ah ka hor inta aan lagaarin gubanaya DVD ah iyo sidoo kale badbaadiyo nuqul ka sida image file ISO ah.
Muuqaaladan ay bixiyaan TMPGEnc u muuqdaan in ay ku kala duwan yihiin in ay version lacag la'aan ah oo la bixiyey. Author TMPGEnc DVD ayaa version 2 yimaado oo lacag la'aan ah, laakiin waxa keliya oo badasha files AVI in MPEG-1, oo leh 30 maalmood Ibtilo MPEG-2. Waxa ay noqon doontaa ka xadidan haddii aad u baahan tahay si loogu badalo nooca kale ee qaabab file. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego interface, TMPGEnc mid ah in DVD Creator ka shaqeeya, inkastoo design ma fiirin aanu sida rafcaanka.
On top of in, waxa kale oo ka mid ah labada Tifaftiraha (la tafatirka sare) iyo sidoo kale gubi. Sidaas oo ay tahayna, waxa ay si aad digtoonaan haddii aad jeceshahay in aad ku gubi doonaan gubi dibadda. Waa arrin xaqiiqo ah in ay u dhaw raaxadeeda waxa wada in software isku leeyihiin halkii laga saaray.
The Video Converter Ultimate noqon doonaa taam ugu fiican haddii aad u baahan tahay si loogu badalo noocyada file kala duwan iyo sidoo kale in ay wax ka bedel iyo gubi aad oo macmal ah videos gal DVD ah. Waxaa ka buuxa oo dhan muuqaalada dhisay-in oo horena si ay u caawiyaan fududeeyo aad u. Ka sokow video tafatirka, qaab file diinta iyo DVD qoraalka, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa online videos ama music ka goobood oo online oo caan ah in la dhamaystiro maktabadda aad hadda.
Waxaa la iman AAN khasaaro tayo leh ee diinta iyo xawaaraha cajiib ah oo 30 jeer ka dhakhsi badan converters kale halkaas. Download oo isku day inaad ka soo baxay maanta oo aan arko sida ay u barbar inteeda kale oo ka mid ah fursadaha lagu taliyey.
DVD hadhin Alternative
Waa maxay sababta ma aha DVD Drive ayaa Working?
Top 5 Online Video jaraya iyo Sida loo jar Video Online ah
Sida loo Download Music ka music.com